Maxaad kala socotaa qaab dhismeedka baarlamaanka maamulka Jubbayo tirada? |
Maxaad kala socotaa qaab dhismeedka baarlamaanka maamulka Jubbayo tirada?
Qorshaha Baarlamaanka Jubba ayaa taariikhdu markii ahayd 20/01/2015 ri rasmi ah loo furay iyadoo kulankaas daahfurka ah ay goobjoog ka haayeen wakiilo ka socday beesha caalamka iyo dowlada dhexe ee Somalia, hadaba wajhti intee dhan ayuu socon doonaa qorshaha soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubaland?
Qorshahan wuxuu socon doonaa muda bil ah laga soo bilaabo maalintii la daahfuray waxaana mudadaas Bisha ah qorshaysan in la qabto dhowr arimood oo is xigxiga kuwaas oo qaar qabsoomeen qaarna ay wali dhiman yihiin.
1) In siminaar loo qabto gudiyada loo xilsaaray soo xulista baarlamaanka kuwaas oo kala ah gudiga farsamada,gudiga dib uheshiisiinta iyo gudiga xalinta khilaafaadka
2) In golaha wasiirada maamul goboleedka Jubaland iyo wakiilada IGAD ka arinsadaan qaabka ugu haboon ee loo guda galayo dhismaha baarlamaanka Jubba
Super Tadarise for sale, clomid online.
3) In la soo aruuriyo odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee deegaanada Jubaland lana xareeyo si siminaar loogu furo markaas kadibna ay isla gartaan qaabka iyo shuruudaha ay ku soo xulayaan xildhibaanada deegaanada ay matalaan.
4) In odayaasha dhaqanku ay boos kasta sadax shaqsi soo gudbiyaan kuwaasoo ay gudiyadu hal shaqsi kasii xulan doonaan iyagoo raacaya shuruudaha loo dejiyay.In hadi khilaaf yimaado loo gudbiyo gudiga xalinta khilaafaadka si ay uxaliyaan khilaafkaas.
Tirada guud ee xildhibaanada la soo xulayo waa 65 xildhibaan,degmo kasta waxaa loo qoondeeyay 4 xildhibaan marka laga reebo degmada Kismaayo oo 9 xildhibaan loo qoondeeyay.
Waxaa sidoo kale jiri doona tiro kale oo xildhibaano ah ku imaan doona magacaabis(nomination).
Qiyaastii 21/02/2015 ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo xulista baarlamaanka Jubaland laguna dhawaaqo.